Guqula uMfanekiso ube ligama lokuHlela | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Umthombo wefoto Guqula umfanekiso ube ligama lokuhlela: Photogramio
Khawufane ucinge ukuba wenze umfanekiso ogqibeleleyo. Inayo i-infographic kwaye uza kuyisebenzisa ukubonisa iprojekthi yakho. Kwaye xa uyijonga eofisini ufumanisa ukuba inempazamo. Impazamo ebulalayo! Ngokuqinisekileyo unokuba unayo ifayile yoqobo kwaye uyitshintshe ngokukhawuleza, kodwa kuthekani ukuba awunayo? Sukuba nexhala, musa ukufumana "ububi obusixhenxe" onokuthi ubufumane Guqula umfanekiso ube ligama lokuhlela. Ngaba uyazi ukuba ungayenza njani?
Ukuba uye wazifumana ukule meko kwaye ubungazi ukuba umfanekiso unokuguqulwa ube liLizwi ukuze uhlelwe, ngoku ingxaki iya kuphela ngonaphakade kuba siza kukunika izitshixo zokwenza ngokulula.
1 Kutheni uyiguqulela kwiLizwi
2 Ungawuguqula njani umfanekiso ube liLizwi ukuze uhlelwe
Kutheni uyiguqulela kwiLizwi
Kuyinyani ukuba xa uguqula umfanekiso ube liLizwi ezinye izinto ziya kulahleka, ayizukufana nomfanekiso woqobo, othi mhlawumbi iyakuchithwa kwaye kuya kufuneka uhlaziye. Kodwa inyani kukuba kuluncedo ukwazi ukuba ungawuguqula njani umfanekiso uye kwiLizwi ukuze uhlelwe.
Okokuqala, kuba iya kukuvumela ukuba uphinde uphinde ubhale isicatshulwa okanye iindawo ezithile zomfanekiso, ukuze uhlaziywe okanye ususe ezo mpazamo ezazinomfanekiso ngokwawo.
Okwesibini, kuba unokuncamathisela emsebenzini wakho ngokuguqula okanye ukucima iinxalenye ezingakuniki mdla, endaweni yokushiya umfanekiso njengoko unjalo, ngamanye amaxesha ongacetyiswayo.
Kwaye, okwesithathu, kuba ngale ndlela awuyi kuxhomekeka kwinkqubo yokuhlela imifanekiso. Into eqhelekileyo kukuba ibikhona kwiikhompyuter ezithile kodwa ngamanye amaxesha ayifani naleyo, okanye awunazo izixhobo kunye neyokuqala ukuyibuyisela kwakhona, ke kuya kufuneka wenze iiglobhu okanye uqale ekuqaleni ukwenza utshintsho.
Kuyo yonke le nto kusoloko kucetyiswa ukuba ube nale "ndlela yokubaleka" oyisebenzisayo xa uyifuna. Ewe kunjalo, eyona nto intle iya kuba kukugcina eyokuqala kwi-psd, eyifomathi ekuvumela ukuba uphinde uphinde ubuyise umfanekiso kwinxalenye oyifunayo. Kwenzeka ntoni ukuba, kuba inkulu kakhulu kwaye inzima, ayininzi eyigcinayo iiveki, iinyanga okanye iminyaka kwaye, xa ifuneka kakhulu, uphela ungayifumani. Ke unaso esinye isisombululo.
Ungawuguqula njani umfanekiso ube liLizwi ukuze uhlelwe
Umthombo: YouTube (Uncle Tech)
Ukuya kwinxalenye ebonakalayo, inyani kukuba kukho iindlela ezininzi zokuguqula umfanekiso ube ligama ukuze uhlelwe. Uninzi lwazo lungamaphepha ewebhu anesi sixhobo senziwe sasebenza. Nangona kunjalo, ngaphambi kokukunika imizekelo yazo, sifuna ukukushiyela isaziso.
Kwaye kukuba ngokufaka umfanekiso kumaseva wabo uya kuphulukana nolawulo lwayo. Sithetha ntoni? Ewe, awazi ngenene ukuba baya kwenza ntoni ngayo. Uninzi lwazo luyazicima emva kwethutyana, kodwa abanye banokuyigcina, okanye bayikope ...
Ke ngoko, xa umfanekiso ubaluleke kakhulu, ukuba unedatha yabucala, okanye nayiphi na imeko apho ukhuseleko kufuneka lugcinwe khona, kuyacetyiswa ukuba wenze uguquko ngeenkqubo ezifakwe kwikhompyuter.
Ngale nto ithethwayo, iindlela zokuguqula umfanekiso ube ligama lokuhlela zezi zilandelayo:
Siqala ngesixhobo esikwi-Intanethi esiza kuguqula umfanekiso ube liLizwi kwimizuzwana embalwa. Ewe kunjalo, kuguquko, umfanekiso uyafuneka kwifomathi yeJPG, kuba kungenjalo ngekhe ukwazi ukwenza njalo.
Kwakhona, ifayile oyilayishayo ayinakudlula kwi-100MB kwaye ukuba ulayishe imifanekiso emininzi, ayinakuba nkulu kune-150MB (ikuvumela ukuba ulayishe imifanekiso engama-20).
Nje ukuba uyilayishe, ikuvumela ukuba ukhethe ifomathi ofuna ukuyiguqula, nokuba kukwiLizwi 2007-2019, iLizwi 2003…. Unethuba lokubonwa kwempawu ebonakalayo kwimifanekiso. Kuya kufuneka ucofe iqhosha lesabelo kwaye iya kuthatha yonke into.
Olunye ukhetho kuya kufuneka uguqule umfanekiso ube liLizwi lokuhlela yile, ikwi-Intanethi. Konke okufuneka ukwenze ukulayisha umfanekiso weJPG (awamkeli ezinye iifomathi) kwaye, ngokungafaniyo nabanye, into oza kuyenza kuqala kukuyiguqula ibe yiPDF. Nje ukuba wenze, iyakuguqula ibe liLizwi. Yiyo i umfanekiso uya kuguqulwa kabini.
Oku kunokukhokelela kwilahleko encinci yomgangatho.
Ukuba umfanekiso wakho awukho kwiJPG kwaye ukwenye ifomathi, esi sixhobo sesakho kuba uya kuba nakho ukuguqula uninzi lweefomati zemifanekiso, zombini ezaziwayo nezingaqhelekanga, ezivula uluhlu olubanzi lwamathuba.
Konke okufuneka ukwenze kukukhetha iifayile, nokuba zikwiDrive, iDropbox okanye kwikhompyuter yakho, yitsho ukuba yeyiphi ifomathi yomfanekiso kwaye ufuna ukuyiguqula (kule meko iya kuba yiDok eliLizwi, nangona wena unayo iDocx kunye ne-ODT ukuba ukhetha ezo fomathi).
Kule meko siya kwesinye isixhobo esikwi-intanethi ukuzama. Eli liphepha apho uguqula kungekuphela imifanekiso yeJPG kwiLizwi, kodwa nakwiPNG, eyenza ukuba iluncedo.
Enye yezinto ezinqabileyo ngokubhekisele kwizindululo zangaphambili kukuba Bayakucela ukuba ubhale ngoluphi ulwimi ukuba unamathuba amakhulu okuchaneka. Emva koko kufuneka ulayishe ifayile kwaye, emva kokugqitha kwikhowudi yomfanekiso, uhlalutya isicatshulwa somfanekiso.
Isiphumo kukuba ufumana uxwebhu, ngesiqhelo ngesikimu esinye, kodwa ngesicatshulwa kuphela, imifanekiso iya kunyamalala.
Ewe, kholwa okanye ungakholelwa, ngeGoogle Drayivu unokuguqula umfanekiso ube ligama lokuhlela. Into ekufuneka uyenzile kuku layisha umfanekiso weJPG kwifolda yakho yeDrayivu. Emva koko, kuya kufuneka ufumane ifayile kwaye, ngokunqakraza kuyo, kuya kufuneka ukhethe Vula kunye / noGoogle amaXwebhu.
Nje ukuba uyivule, yiya kwimenyu ephezulu, kwiFayile / kwiDowload (okanye ukhuphele) iMicrosoft Word. Kwaye uya kuba sele uguqukile.
Ngale ndlela uya kuqinisekisa, kuba yiakhawunti yakho, ukuba inokhuseleko olukhulu lokuguqula iifayile zabucala.
Nangona kunjalo, kukho iinketho zenkqubo yokufaka, ezinje nge-PDFElement, eya kukuvumela ukuba uguqule umfanekiso ube liLizwi ukuze uhlelwe kwimizuzwana embalwa kwaye uya kuba nguwe oya kulawula imvelaphi kunye nesiphumo ukuba awufuni ukubeka umngcipheko kukhuseleko.
Ngaba uyazi ngakumbi iinkqubo okanye iwebhusayithi ukuguqula imifanekiso ibe liLizwi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Guqula umfanekiso ube liLizwi ukuze uhlelwe
Uyenza njani ikholaji kwiFotohop